airpods pro matipi & manomano
Kuru Nhau & Ongororo AirPods Pro Matipi & Matipi
AirPods Pro Matipi & Matipi
Iyo Apple AirPods uye AirPods Pro zvachinja mushamba wefoni isina waya neshanduko yavo dhizaini uye nyore kushandisa, asi unoita sei zvakanyanya kubva kwavari?
Isu tinotarisa iwo matipi, manomano uye zvakavanzika maficha izvo zvinokubatsira iwe kuwana yakanakisa yekuteerera ruzivo, asi zvakare dzidza mashoma mashoma anonakidza ruzivo nezve maAirPods
Let & apos; s kutambisa nguva uye kutanga ne ...
Zano # 1: Wanga uchiziva here kuti unogona kushandisa AirPods Pro nefoni zhinji dzeApple?
Iyo AirPods Pro inogona kushanda nepavanogona napo ne iPhone, asi hazvireve kuti vakakunda & apos; havashande nemamwe mafoni. Muchokwadi, izvo & apos; zviri nyore kwazvo kuzvibatanidza kune mazhinji mafoni eApple kunze uko. Kuti uite izvi, tanga wavhura iyo AirPods Pro kesi ine mahedhifoni mukati, pinda uye bata bhatani riri kumashure kwenyaya yacho kudzamara waona mwenje chena unovheneka, uyo unoratidza kuti yako AirPods Pro yakagadzirira kuiswa pairi. Ipapo, iwe unongofanirwa kuvhura iyo Bluetooth maseturu menyu pane yako Android foni, ita shuwa kuti yakagadzirirwa kutsva zvishandiso zvitsva, mira mashoma uye iyo AirPods Pro inozoratidza kumusoro uye iwe unogona kuibatanidza ivo nekamwe chete tap.
Kana wabatanidzwa pafoni yeApple, iyo AirPods Pro icharamba ichitsigira iyo inoshanda ruzha kukanzura (ANC) ficha iyo iwe yaunogona kushandisa nekutsikirira uye kubatisisa padanda reAirPods Pro. Uye ndiwo maratidziro aunoita nefoni yeApple.
Zano # 2: Iyo chaiyo nzira yekuvatora kunze kwenyaya
Kana iwe uine zvigunwe zvakakura, unogona kuzviwana zvakaoma kutora iyo AirPods Pro kunze kwavo. Mukana urikushandisa nzira isiriyo kuvaburitsa. Paunenge uchinhonga maAirPod ekutanga kunze kwenyaya yavo akaitika nekufamba kwedivi, kutora iyo AirPods Pro iwe unofanirwa kuvakwevera kwauri uye kwete kudivi. Paunoona uyu musiyano, asi wakakosha musiyano, iwe uchaona kuti kutora iyo nyowani AirPods Pro kunze kwenyaya yavo kuri nyore zvakanyanya.
Zano # 3: Kurumidza kugonesa kana kudzima ruzha kukanzura
Icho chinouraya cheiyo nyowani AirPods Pro pasina mubvunzo iko kushomeka kweruzha kudzima (ANC) iyo inodimbura ambient mitinhimira kuti iwe ugone kutarisa pamimhanzi chete kana kuishandisa iyo kudzivirira mheremhere yemativi inokukanganisa iwe pabasa. Asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kunzwa chimwe chinhu, saka ungaite sei nekukurumidza kushandura pakati pekudzima ruzha kuri kuvhurwa wobva wadzimwa?
Pane nzira mbiri dzekuita izvozvo: yekutanga, ndeyekutsikirira nekubata kwenguva pfupi padanda reAirPods Pro. Iwe unonzwa 'pfupi' kuratidza kuti wabudirira kuvhura ANC kana kudzima ANC, uye izvi zvinoshanda zvisina ganho muhupenyu hwedu.
Kana iwe uri pafoni yako, zvisinei, iwe unogona kuita chimwe chinhu zvakare: swipe pasi kubva kumusoro kwepamusoro kumucheto kwe iPhone yako kuti uunze Control Center uye ipapo iwe unofanirwa kuona mavhoriyamu ekudzora aine shoma AirPods Pro icon mukati mevhoriyamu bar. Kwenguva refu pinda bha vhoriyamu uye iwe uchaona matatu akasiyana ma modhi ekudzima ruzha: On, Off uye Transparency mode, uye iwe unogona kukurumidza kuchinja pakati peizvi kubva pane iyo menyu.
Zano # 4: Tarisa uone kana uine chaiyo nzeve matipi saizi
Kana usina chokwadi kana uri kuwana chakanakisa chiitiko kubva kune yako AirPods Pro, wadii kutarisa kana iro zano rauri kushandisa iri saizi chaiyo kuti upe yako chaiyo chisimbiso? Chisimbiso chakanaka chakakosha kuitira kuti uwane kuzara kwekukanzura ruzha (ANC).
Saka unozviita sei? Enda muZvirongwa> Bluetooth, uye pano iwe unofanirwa kuona yako AirPods Pro yakanyorwa. Tinya pane diki ruzivo 'i' icon kurudyi, uye iwe uchaona iyo 'Nzeve Tip Fit Bvunzo' sarudzo. Sarudza iyo uye uve nechokwadi chekuti une ese mairi AirPods Pro uye anokukwanira zvakanaka. Iwe unonzwa pfupi pfupi mimhanzi clip uye iyo AirPods Pro inoshandisa ruzha urwu kuona kana iwe uine chisimbiso chakanaka neyako yazvino saizi nzeve matipi. Kana zvisiri, iwe unowana zano rekuti ushandise chisimbiso chakasiyana, uye kana hongu, ipapo uchaona meseji ichiti iwe unowana chisimbiso chakanaka.
Zano # 5: Shandisa imwechete AirPod kuchengetedza bhatiri
Kana iwe uchinakidzwa neAirPods asi usingade kunzwa sekuti uri wega kubva kune yekunze nyika, kana kana iwe uchida kuchengetedza bhatiri, zano rakakura ndere kungoshandisa imwechete AirPod. Muchokwadi, iyi ndiyo nzira yandinoshandisa AirPods kazhinji yenguva, ini kazhinji ndaingove neyakarurama. Kana iwe uri parwendo rwakareba, iyi ndiyo nzira yakanakisa yekuita chokwadi kuti haupere bhatiri: iyo nguva iyo imwe AirPod yauri kushandisa inorasikirwa nebhatiri, iwe unogona kuidzosera ipapo ipapo kuitira iyo yepamusoro-kumusoro, nepo pakarepo kuchinjira kune imwe, yakazara zvakazara imwe.
Zano # 6: Ruzha kukanzurwa neimwe AirPod
Kana iwe uchida kugonesa kudzima ruzha kana iwe uine imwechete AirPod pauri, chimwe chinhu chinouya chinobatsira kana iwe uri mukufona, semuenzaniso, unogona kuzviita. Pinda muZvirongwa, wozowanikwa, wozoti AirPods wobva watsvaga iyo sarudzo inoti 'Ruzha kukanzura neAirPod imwe chete' uye uve nechokwadi chekuti & apos; yakavhurwa.
Zano # 7: Kurumidza kutarisa kana wakabhadharwa zvizere
Iyo AirPods Pro inouya mune imwe nyaya inotsigira isina waya kuchaja, iyo inogona kuve yakanyanya nyore. Asi kana iwe uchibhadharisa iyo AirPods Pro uye iwe usina chokwadi kana vasvika kuzere kuchaja, pane nzira iri nyore yekutarisa izvo. Iine AirPods Pro ichiri kuchaja pombi pamberi penyaya panowanikwa mwenje wechiedza cheLED uye ichavhurika kwekanguva. Kana iyo & apos; s amber muvara, izvo zvinoreva kuti ivo vachiri kubhadharisa, asi kana iwe ukawana girini girobhu, iwe unogona kubva waziva kuti ivo ikozvino vazara zvizere.
Uye wanga uchiziva here kuti iwe unogona zvakare kubvunza Siri nezve mabhatiri stats pane ako AirPods? Ichakutaurira iwe ruzivo rwese rwaunoda kuti uzive.
Zano # 8: Teerera muhurukuro iri kure newe
Kugonesa iyi sarudzo, enda muZvirongwa, nyora muDhijitari Center, uye ita shuwa kuti Kunzwa tebhu yakavhurwa. Kana zvirizvo, Rova zvakasimba kubva kumusoro kurudyi kumucheto kwe iPhone yako uye refu pinda pane inonzwa icon. Pano, iwe uchaona iyo Live Teerera sarudzo, ita shuwa kuti & apos; yakavhurwa.
Mushure mekunge maita zvese izvi, iwe unotanga kunzwa chero chiri padyo nemakrofoni pane yako iPhone. Zvichitaurwa zviri nyore, izvi zvinoreva kuti kana iwe uri muhurukuro uye mudzidzisi ari kure uye & & apos; zvakaoma kuzvinzwa, unogona kuisa yako iPhone padhuze navo uye nekuteerera zviri nyore kuburikidza neako AirPods Pro. Kana iwe unogona kutoteerera mukati pane hurukuro kubva kure kana iwe ukakanda foni yako padyo neiyo hurukuro neiyo Live Teerera sarudzo yakavhurwa (zvirokwazvo, izvo & maapos; hachisi chinhu chakanaka kuita).
Uye izvi zvinoputira edu epamusoro matipi uye manomano eAirPods Pro.
Iwe une yako peya yeAirPods? Don & apos; usazeze kutizivisa nezve ruzivo rwako navo mune zvakataurwa!
iyo lg g3 yakaburitswa rini
iOS 15 ichaunza Safari nyowani ku iPhone
Under-screen Touch ID yakapihwa Apple & apos; s iPhone 14 dzakateedzana, 2022 iPhone SE kuuya ne5G
Tora yemahara Samsung Galaxy S10e kubva kuSprint paunotenga Galaxy S10 / S10 +
Apple iPhone XS Max inofungidzirwa kuti mutengo wekugadzira wakaratidzwa